HARARE (Reuters) - Zimbabwe's factory capacity utilisation rose to a 10-year high of 56.25% in 2021, the country's main industrial body said on Wednesday, but cautioned that...
© Reuters. FILE PHOTO: An employee works at a fridge manufacturing company in the capital Harare, November 14, 2013. REUTERS/Philimon Bulawayo
HARARE (Reuters) - Zimbabwe's factory capacity utilisation rose to a 10-year high of 56.25% in 2021, the country's main industrial body said on Wednesday, but cautioned that resurgent inflation and foreign currency shortages threatened a sustained recovery.
Owing to economic mismanagement, the manufacturing sector's share of Zimbabwe's gross domestic product (GDP) has declined from a peak of around a quarter in the 1990s to less than a fifth now.
A survey of 440 manufacturing firms by the Confederation of Zimbabwe Industries (CZI) showed that capacity utilisation - actual output measured against potential production capacity - increased to 56.25% in 2021, from 47% the previous year. This was the highest level since 2012.
The industry body, however, warned that high inflation and a currency crisis posed a serious threat to Zimbabwe's economy.
Zimbabwe is experiencing high inflation again after a marked slowdown in 2021. Year-on-year inflation hit 96.4% in April, up from 60.6% at the beginning of the year, as its currency continues to weaken rapidly against the U.S. dollar.